Allgedo.com » Booliska Mombasa oo Dad ku dilay Magaalada Mombasa kuwa kalana xabsiga dhigay
Booliska Mombasa oo Dad ku dilay Magaalada Mombasa kuwa kalana xabsiga dhigay
Print here| By: allgedo.com: Monday, December 10, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Ciidamada booliska dalka Kenya ayaa dilay sedex ruux halka ilaa 10 kalana ay xabsiga dhigen gudaha magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta dalka Kenya.
Wararka waxaa ay sheegayaan in falkan uu ka dhacay saldhig ciidan oo kuyaal gudaha magaalada kaas oo la sheegay in koox katirsan MRC ay weerar kusoo qaadi rabeen hase ahatee ay ciidamada ka hor tageen.
Saraakiisha amaanka ayaa sheegay in dadka deegaanka ay ciidamada ku wargeliyeen in rag hubaysan oo wata baangado iyo falaaro tira ahaana gaaraya ilaa 50 ay kusii jeedeen saldhiga hase ahaatee ay ka hortageen labana ka dileen 10 kalana ay xabsiga dhigeen
Koox looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin Ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Booliiska deegaankaasi ayuu dhexmaray falkani iyadoo kooxaha looga shakiyay shabaab inay xiriir la leeyihiin laga dilay 3-halka 10-kale xabsiga loo taxaabay.
Raga saldhiga weerarka ku qaaday ee looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda lagu magacaabo MRC ayaa waxa ay wateen falaaro iyo sidoo kale baangado kuwaasi oo weerarka Saldhiga ku qaaday kadibna ciidanka ay dagaalameen.
Kooxdaan lagu magacaabo MRC ayaa waxa ay yihiin koox kasoo horjeeda Dowladda dalka Kenya kuwaasi oo sida la sheegay aaminsan in Gobalka xeebta ee Mombasa uusan ka tirsaneyn dalka Kenya.